Johanesa Rakotovao, mpitandrina - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Johanesa Rakotovao, mpitandrina
RAKOTOVAO Johanesa ( 1899 - 1966 )
Anisan'ireo olomanga nanamarika ny tapany voalohany tamin'ny taonjato faha 20 teo amin' ny tantaran'ny fiangonana protestanta malagasy ny pasitora Johanesa Rakotovao. Vakinankaratra avy ao Masinandraina Antsirabe ny ray aman-dreniny. Evanjelisitra tao amin'ny misiona norveziana (NMS) ny rainy. Tany amin'ny faritra bara no nahalehibe azy. Toy ny ankizilahy rehetra tany dia niandry omby teny an-dohasaha teny koa izy fony zaza. Nampianatra azy an-trano ny ray aman-dreniny ary mbola kely taona izy dia nahazo ny mari-pahaizana : "Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Primaire". Nampianatra tao amin'ny sekolin'ny misiona NMS tao Betafo izy. Olona tena kinga saina izy. Nianatra teolojia tao amin'ny Sekoly Teolojia Loterana Ivory, Fianarantsoa izy ny 1924-1927. Rehefa tonga mpitandrina dia niasa 11 taona tany amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny nosy, dia tany Manakara, Farafangàna ary Vohipeno. Tamin'izany dia tsy nety nihonona tamin'ny trano tsotsotra nomena nipetrahany izy ka dia nianatra tsikelikely ny amin'ny tao trano ary nanorina trano hafa tsara voatra sady malalaka kokoa ho azy sy ny ankohonany. Honena koa ireo ankizy nivenjivenjy tao an-tanànan'i Manakara izy ka dia nanorina sekoly hianaran'izy ireo. Anisan'ny nandray antanàna, nampianatra tao amin' io sekoly io izy tany am-boalohany, raha vao nisokatra ny sekoly. Tetsy an-daniny dia nitohy ihany ny fikarakarany ireo olona niadidiany tao amin'ny fitandremana. Tamin'izany dia nanohy ny fianarana teolojia indray izy ary dia nantsoin'ireo misionera hampianatra ny Testamenta Taloha, tao Ivory.
Tonga profesora izy, nianatra ny teny Grika sy Hebreo, ny teny Anglisy, ny Norveziana. Nahafehy tsara ny teny Frantsay rahateo koa izy.
Nankafiziny fatratra ny vaky boky, nampangetaheta azy hatrany, izay nanitarany ihany koa ny fahalalàny manokana. Nitady hevitra mihitsy izy mba hahazoany tahirimbola hividianana boky.
Nisy fotoana, nataon'i pastora dia an-tongotra: Manakara - Fianarantsoa, izay lalana 163 km, na teo aza ny fiaran-dalamby. Ny vola tokony ho natao saram-pitanterana amin' izay mba notehirizina nividianana boky.
Raha nalefan' ny fiangonana protestanta tany Tambaram (Madras), tany Inde izy ny 1938-1939, dia nisy toerana iray nalehany izay nisy lalana nilàna fampiasana "cabine" nitàna. Naleony nandeha an-tetezana nefa, sitrany ahay tsy nandoha vola ka mba nisy nividianana boky indray !
Ankohatra ny famakiana boky dia nanoratra koa pastora tamin'ireny gazetim-piangonana ireny, toy ny : "Ny Mpamangy" ; ny gazetin' ny fiangonana notandremany tao Antsirabe, izay izy no loharano nipohirany. Namoaka fanadihadiana tsara rindra momba ny Bokin'i Isaia koa izy. Misy tononkira nosoratany ao amin'ny fihirana protestanta Malagasy.
Tamin'ny Ady Lehibe Faharoa dia nisy fotoana nandalovan'ireo mpiantafika afrikana tao Madagasikara. Noheverin'i pastora fa nila fampaherezana izy ireo ka nitoriany ny filazantsara mba ho vatsim-panahiny.
Nianatra tany Norvezy sy tany Etazonia, tany Amerika izy ny 1950-1951. Tany Oslo izy dia nihaona tamin'i Sigmund Mowinckel, izay profesora momba ny Testamenta Taloha nanana ny lazany sy ny fahaizany. Nidera ny fahaizan'i pastora teny Hebreo, profesora.
Nony niverina tany Madagasikara pastora dia nirotsaka nanao politika, nitolona mba hahazoana ny fahaleovantena. Voatery niala tamin'ny fampianarana tany Ivory izy noho izany. Ny taona 1954 anefa dia nanaiky ny antson'ny fiangonana Ambonin' Ampamarinana ao Antananarivo mba handimby ny pastora Randzavola izy.
Niverina tany amin'ny tany nihaviany, any Antsirabe izy ny 1963 ka nitandrina tao amin'ny fiangonana loterana. Ny volana febroary 1966 dia voafidy ho filohan' ny sinodam-paritany Avaratr'i Mania ao amin'ny fiangonana loterana izy. Nodimandry izy ny 17 novambra, io taona io ihany ary nomena ny mari-boninahitra: "Ordre National Malgache."
Tao amin'ny didim-pananana napetrany dia nirakitra ihany koa izao teny izao: "Mifankatiava tsara."
Nalevina ao antonkotanin'ny fiangonana loterana Antsirabe Antampontanàna ny nofon'i pastora Johanesa Rakotovao.
Nalaina tao amin'ny : "Hommes et Destins", Dictionnaire Biographique d'Outre-Mer, tome 3, nivoaka ny 1977, avy tao amin'ny Académie des Sciences d'Outre-Mer (15, Rue la Pérouse, 75116 Paris, France).
"Ny tantely tovon'anoka", natonta tao amin'ny Imprimerie Luthérienne Tananarive, 1961 ; dia anisan'ny boky kely mirakitra ny sangan'asan'i Pastora Johanesa Rakotovao, nosoratany fony izy nanokatra sekoly tany Manakara.
Hoy izy momba ny lohatenin'ity boky kely ity :
Tantely tovon'anoka :
Dia misy koa tantara
Voafantina sy tsara
Koa hafatra isan-trano
Ny anatra no tano.
Anisan'ny niandraikitra ny fampianarana izy nandritra ny enimbolana voalohany nihorenan'ny sekoly. Ny mba hananana tsianjery ho an'ny ankizy no antony nanoratany ireo angano ireo. Saiky nandritra ny fakàn-drivotry ny mpianatra no nanoratany azy rehetra.
Hoy pastora eo amin'ny teny mialoha:
"Tia tononkira hianareo ankizy. Ka ampoiziko fa ho maminareo ihany izy ity. Kanefa na mankasitraka azy tokoa aza hianareo, dia tsy mba afaka hirehareha amin'izay vitako aho, satria tsy zokiny fa zandriny. Efa be rahatreo, mantsy, ny vitan'ny olona, sady ngezalahy avokoa ireny mpanoratra ireny.
Afa-tsy ireo vitan'ny tranainy ireo, dia ao indrindra koa ny Filazantsaran'i Jesosy Kristy, izay tena "anoka", ronono mahavelona.
Ka izany indrindra no nanaovako azy ity hoe "tovona", fanampiny ihany !
Tsentsefo àry ny tantely arosoko. Nefa gohy be ny rononom-panahy avy amin'ny tenin'Andriamanitra, dia ho soa hianareo !"
Nampiditra : jantina
Daty : 08/04/2014
Mpamangy : 1965
Vorona mifidy mpanjaka
Fody very anaka
Vano nizaha tandindona
Tsintsina nanao akany
Tsikirity momba fody
Lambo sy tanalahy
Tanalahy sy angidina
Ilay sahona sy ny bibilava ary ny takatra